Ama-FAQs - IShanghai Gianty Ukuhweba Co, Ltd.
I-bamboo kanye ne-Wooden Cutlery
I-Tableware engasetshenziswa kabusha
1. Yini impahla yakho evumelana ngokuphelele? Ingabe lokhu kuphephile kuphephile？
Yi-biopolymer eyenziwe nge-polylactic acid (PLA) engasuselwa ezitshalweni ezinesitashi ezinjengommbila, amazambane kanye nomoba. Lokhu okuqukethwe kwe-BPA kumahhala futhi i-FDA ivunyelwe ukuphepha kokudla. Inani lokuqinisekiswa mayelana nokuqina nokuphepha linganikezwa.
2. Kungani imikhiqizo ye-PLA isimeme?
I-PLA yenziwa isitshalo esisetshenziswa kabusha ngonyaka. Imikhiqizo ye-PLA ingahlanganiswa ngokuphelele yizindawo zokwenza umquba zokuthengisa. Kodwa-ke, nazo zingachithwa ezinye izindlela zokuphatha imfucuza zendabuko ezifana nokugcwaliswa komhlaba.
3. Ngingakwazi ukufaka imikhiqizo yakho emgodini wezindlu ezingemuva?
Sincoma ukulahla imikhiqizo ye-PLA endaweni yomquba wezimboni lapho izoguqulwa ibe ngumquba bese iphendukela enhlabathini. Akunconyelwe ukusetshenziselwa ukwakhiwa komquba ejwayelekile engemuva ngenxa yokuntuleka kwamazinga okushisa aphezulu nezimo zomswakama ezingaguquki.
4. Ungayifakazisa kanjani imikhiqizo yakho?
Izinto zethu ezifakwayo zihlangana namazinga we-ASTM wokuqina. Baqinisekisiwe ukuthi bahlangabezane nalezi zindululo yiBiodegradable Products Institute (BPI) esebenzisa amazinga asekwe ngokwesayensi ukucacisa ukuthi umkhiqizo ungcono yini esikhungweni sezentengiso. Imikhiqizo ayikwazi ukuqukatha uphawu lwe-BPI ngaphandle kokuthi iqinisekiswe ngokusemthethweni. Ngakho-ke funa amagama athi "I-BPI Certified" futhi ungaqiniseka ukuthi umkhiqizo wakho uzophuka endaweni yokuhweba.
5. Ngabe umkhiqizo wakho ulungele ukusetshenziswa kwendawo yokudlela?
Yebo. Imikhiqizo yethu ye-CPLA yakhelwe ngomsebenzi osindayo nokubekezelela ukushisa okuphezulu. Isibonelo, ukusikeka kwethu kuvumela ukusika ukudla okunzima okufana nenyama noma ukukhipha u-ayisikhilimu.
6. Ngabe sifeza noma yini lapho imikhiqizo eyindathane igcina igcwaliswa ngamapulangwe?
Yebo. Izinzuzo zokusebenzisa izinto zokwenziwa kabusha zesitshalo ezingavuseleleka zangempela yize ungeke ukwazi ukuzenza ngenhlanganisela yezentengiso. Lezi zinzuzo, uma ziqhathaniswa neplastiki yendabuko, zifaka igesi encishisiwe egadli nokunciphisa ukusetshenziswa kwemithombo yamandla ngendlela ekwenzile ngayo.
7. Ingabe imikhiqizo yakho ingenziwa ngezifiso ngesikhathi esifushane?
Yebo. Isampula yangokwezifiso zokuhlola livame ukuphuma cishe ngezinsuku eziyi-6. Ngenxa yokuthi sineyakho ifektri yokubumba, ukuklama isikhunta nokukhiqiza isikhunta kuthatha kuphela izinsuku ezingama-35.
8. Ungabamba iqhaza kanjani ekubambisaneni ngokubambisana neGianty?
Uma unentshisekelo kunoma yimiphi imikhiqizo evela eGianty, siyajabula ukuhlinzeka ngemodeli yebhizinisi enokwenzeka kanye nesixazululo se-chain chain sezinto zethu ezikhiqizayo. Isibonelo, i-BionEO yethu enamaphakethe okuthengisa nokuthengisa okudla okusavuseleleka konke kufanele ibhizinisi le-E-commence commence.
9. Ingabe kukhona ukukhetha okusheshayo kwezinto zokuhamba emazweni aseYurophu?
Yebo. I-Hunan-Europe International Railway, umzila wesitimela ongamakhilomitha ayi-10000 osuka efektri laseHunan uya eYurophu. Uma uhamba ngalejantshi entsha, kuthatha kuphela izinsuku ezingama-10-12 ngokwesilinganiso ukuthutha iziqukathi zisuka eHunan China ziye emazweni aseYurophu, ngaphezu kwezinsuku ezingama-20 ezimfushane kunokuthumela olwandle kusuka kumachweba aseChina aseMpumalanga.
10. Ngabe akhona amathuba okubonga noma ukutshala iGianty?
Yebo. Sivulelwe kabanzi ukuthola izithembiso zokutshala imali kusuka kunoma yibaphi abalingani abangaba khona emazweni aphesheya. Sizibophezele ukuheha abahlanganyeli abaningi embonini ye-world eco-friendly tableware.